Very Peri ndiyo Pantone Rudzi rweGore 2022 | Bezzia
Very Peri ndiyo Pantone Rudzi rweGore 2022
Maria vazquez | | Kushongedza maitiro
Isu tatoziva kuti ndeupi ruvara rwakasarudzwa Ruvara rwegore ra2022. Irwo ruvara rutsva runonzi Very Peri (17-3938). Mumvuri we periwinkle blue ine ruvara rwakajeka rwe purplish dzvuku inosanganisa kutendeseka uye kuenderana kwebhuruu nesimba uye kufarira kwehutsvuku.
Pantone Color Institute, iyo unit inoona nezvekusarudza Pantone ruvara rwegore uye kufanotaura mafambiro emarudzi epasi rose inofunga kuti Very Peri inofananidzira kusanganiswa kwehupenyu hwazvino mukunyorerana nemaitiro emavara munyika yedhijitari uye kuti vanozviratidza pamwe chete sei munyika yenyama uye zvinopesana.
Sezvo isu tinobuda kubva panguva yakaoma yekuzviparadzanisa nevamwe, maonero edu uye zviyero zviri kuchinja. Uye hupenyu hwedu hwenyama uye hwedhijitari hwakabatanidzwa munzira nyowani. «Uye izvi zvitsva uye zvakaoma blue hue yakabatanidzwa ne purplish red inosimbisa huwandu hwemikana inounzwa kwatiri »akawedzera Laurie Pressman, Mutevedzeri weMutungamiriri wePantone Color Institute, panguva yekuratidzwa kwePantone Rudzi rweGore 2022.
1 Nzira yekushandisa sei ruvara gore mukati meimba
2 Ruvara musanganiswa
Nzira yekushandisa sei ruvara gore mukati meimba
"Pantone 17-3938 Very Peri inokurudzira hunyowani hwemazuva ano, inounza manzwiro ekutamba kutsva munzvimbo dzemukati uye inounza hupenyu kuburikidza nemhando dzisina kujairika dzakasanganiswa." Iwo mumvuri unosiyana-siyana uyo kunomutsa mweya wekusika, saka yakakodzera kushongedza zvose zvemhuri uye nzvimbo dzebasa.
Inogona kushandiswa kupenda madziro kana sematauriro mufenicha kana zvekushongedza mumba. Irwo ruvara runonakidza uye zviri nyore kuwira murudo narwo, asi chenjera kudarika! Urwu ruvara rwakakurudzirwa nePantone seMuvara weGore 2022 unoshamisa zvikuru. Kana iwe usingade kuneta nazvo nekukurumidza, uchafanirwa kuishandisa mudiki dosi.
PaBezzia isu tinoda zano rekushandisa iyo Wallpaper yakavezwa neruvara urwu kuganhura nzvimbo yekufunda munzvimbo yakajairika, zvakatoipisisa zvakare kuibatanidza mumakamuri ekugara uye yekurara muchimiro che armchair, side table, zvinhu zvekushongedza madziro kana mavhasi. Zvidiki zvidiki, asi zvakamira pachena.
Zvino zvatava kuziva nzira dzatinogona kuishandisa mudzimba dzedu, tinofanira kungoziva kuti ndeapi mavara ekuti tiisanganise nawo. Uye kutibatsira kubatanidza uyu wakakosha mumvuri mumagadzirirwo edu, Pantone yakagadzira mana akasiyana mavara palettes. Pendeti rega rega rinoburitsa chimiro chakasiyana, chinoratidza kuchinjika kwaPeri, uye inotsigirwa nemisanganiswa mitatu yemavara. Unoda kuvawana here?
Bancing Act inoenderana neruvara palette ine echisikigo chiyero cheanodziya uye anotonhorera toni anotsigira uye anosimudzira mumwe nemumwe. Kubwinya kweruvara rwegore kunowedzera mukati meiyi palette yakarimwa zvine hungwaru, ichipinza manzwiro ehupenyu uye kupenya kwekuona.
Tsime musanganiswa wakakwana uye unopindirana wemhando-yakavakirwa mimvuri inoratidzira kuenderana kwegirinhi neiyo yakaradzikwa-kumashure Very Peri, pamwe chete neutano hwezvimiro zveiyi inonaka yakavanzika uye inovaka mimvuri.
En Nyeredzi yeChiratidziro, isu tinokomberedza iyo inofadza uye inodziya yematoni ese ebhuruu ane palette yemakirasi uye asina kwaakarerekera. Pamwe chete, kutsvinda kwavo uye manyorerwo akadzikiswa zvinopa meseji yehunyoro husingagumi.
Zvimwe zvinofadza inzira inotamba uye inoyevedza yeruvara rwekunakidzwa nekuzvimirira, inosimudzirwa nekusatya kusatya uye hunhu hwakareruka hwe Very Peri, inopenya yeblue hue ine kutamba kunokurudzira kusingadzivirirwe kutaura uye kuedza.
Iwe pachako isanganiswa yako nematoni asina kwaakarerekera uye nemagirini iyo inonyanya kubata pfungwa dzedu. Ko iwe Isu tinofunga, zvisinei, kuti zviri nani kuti idzi dzisava dzakasviba. Uye ndezvekuti kusanganiswa nemavara akasviba seaya akatsanangurwa muNyeredzi yeshoo anogona kusviba zvakanyanya nharaunda isina zviyero uye mwenje chaiwo.
Kufanana nePantone Sarudzo yeRuvara rweGore ye2022? PaBezzia ivara rataida zvakanyanya asi kuti kunyangwe riine zvinhu zvakasiyana-siyana hatizvione sezviri nyore kubatanidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Kushongedza maitiro » Very Peri ndiyo Pantone Rudzi rweGore 2022
Marererwo emwana ane hunhu hwakasimba
Izvo 4 zvakanyanya kupindwa muropa chikafu chinoisa hutano hwako panjodzi